नेपाली मुलकी अस्मिता आले इंग्ल्यान्डको यु–१९ टोलीमा परिन, एस्टन भिल्लाको पहिलो रोजाइको डिफेन्डरमा पर्छिन् ! – Etajakhabar
नेपाली मुलकी अस्मिता आले इंग्ल्यान्डको यु–१९ टोलीमा परिन, एस्टन भिल्लाको पहिलो रोजाइको डिफेन्डरमा पर्छिन् !
नेपाली मूलकी अस्मिता आले इंग्ल्यान्डको महिला यु–१९ राष्ट्रिय टिममा परेकी छिन्। इंग्लिस प्रिमियर लिग क्लब एस्टन भिल्लाकी १७ वर्षीया सेन्टर ब्याक अस्मिता युइएफए महिला यु–१९ च्याम्पियनसिप छनोट प्रतियोगिताका लागि इंग्ल्यान्डको युवा टिममा परेकी हुन्।
इंग्लिस क्लब एस्टन भिल्लाकी डिफेन्डर अस्मिताले अब इंग्ल्यान्डको युथ समूहबाट प्रतिनिधित्व गर्दै साइप्रस, बेलारुस र सर्वियासँग खेल्नेछन्। अस्मिता इंग्ल्यान्डको यु–१९ टोलीमा समेटिएको उनको क्लब एस्टन भिल्लाले उल्लेख गरेको छ । पहिलो चरणको छनोट खेल सुरु भइसकेको छ ।
साइप्रसविरुद्ध ८–० को फराकिलो जित निकालेको खेलमा अस्मिता बेञ्चमै रहिन् । अवकासप्राप्त गोरखा सेनाकी सन्तान अस्मिता ७ वर्षको उमेरमै इंग्लिस प्रिमियर लिग क्लब एस्टन भिल्लामा भर्ना भएकी थिइन्। हाल उनी एस्टन भिल्लाको पहिलो रोजाइको डिफेन्डरमा पर्छिन्।
इंग्ल्यान्डको एक अनलाइनलाई दिएको अन्तर्वार्तामा उनले आफ्नो दाइले खेलेको देखेर फुटबलमा आकर्षित भएको बताएकी छिन्। उनी कहिलेकाहिँ दाइहरुसँगै फुटबल समेत सिक्ने गर्थिन्। त्यसपछि उनका बुबाले उनलाई ७ वर्षको उमेरमा एकेडेमीमा भर्ना गरिदिएका थिए।
इंग्ल्यान्डका पूर्व कप्तान डेभिड बेहक्यामकी फ्यान उनको लक्ष्य इंग्ल्यान्डको महिला राष्ट्रिय टिममा पर्नु हो। पहिलो चरणको छनोटमा युरोपका ४८ राष्ट्रको सहभागिता रहेको छ । सहभागी ४८ टोलीलाई १२ समूहमा विभाजन गरिएको छ । इंग्ल्यान्ड समूह ‘के’ मा रहेको छ । छनोटका खेलहरु २ देखि ८ अक्टोवरसम्म बेलारुमा आयोजना भइरहेको छ ।
हरेक समूहका शीर्ष दुई टोली र उत्कृष्ट हुने तेस्रोका चार टोलीले दोस्रो चरणमा स्थान बनाउनेछ । दोस्रो राउन्ड नोभेम्वरमा हुनेछ । यसबाट छनोट हुने टोलीले जर्जियामा जुलाई २०२० मा हुने युइएर्फ वुमन्स यु–२० मा सहभागिताको अवसर पाउनेछ ।
Posted on: Thursday, October 3, 2019 Time: 19:19:21
-5708 second ago
-5217 second ago
-4630 second ago
-3257 second ago